China ပန်းချီစက်ရုပ် HY1010A-143 ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ Yunhua
7 Axis စက်ရုပ်ဂဟေဆော်လုပ်ငန်းခွင်
8 Axis စက်ရုပ်ဂဟေဆော်လုပ်ငန်းခွင်
1 ဝင်ရိုး rotator
7 Axis စက်ရုပ် Arc Welding Workstation
Two Positioner နှင့်အတူ Axis စက်ရုပ်ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းခွင်
Mig စက်ရုပ် welding
HY1010A-143 သည်စက်ဝိုင်းအမျိုးမျိုးရှိသေးငယ်သောနှင့်အလတ်စားအစိတ်အပိုင်းများကိုမှုတ်ထုတ်ရာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးချပြီးစီးပွားရေး၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၊ အရည်အသွေးမြင့်မှုတ်ဆေးဖြန့်ဖြူးသည့်ဖြေရှင်းချက်ကိုဖောက်သည်များအားပေးသည်။ ၎င်းတွင်ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစား၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကောင်းမွန်မှုနှင့်ဘက်စုံသုံးမှု၊ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ HY1010A-143 ကို turntable၊ slide table နှင့် conveyor chain စနစ်ကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းစဉ်အရန်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အလွယ်တကူပေါင်းစည်းနိုင်သည်။ ၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်ဆေးသုတ်သည့်နည်းပညာနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိခြင်းကြောင့် HY1010A-143 သည်ဆေးသုတ်ခြင်းကိုများစွာသက်သာစေပြီးပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှုန်းကိုတိုးတက်စေသည်။
HY1010A-143 ကိုဘာသာစကားပေါင်းစုံပံ့ပိုးမှုစွမ်းရည်ရှိသောရေမှုန်ရေမွှားသင်ကြားခြင်းကိရိယာအသစ်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူသောမျက်နှာပြင်စက်ရုပ်ထိန်းချုပ်မှုကိုခေတ်မီနည်းပညာဖြင့်ပံ့ပိုးထားသည်။ အသုံးပြုသူများသည်သင်ကြားမှုအောင်မြင်ရန်အရေအတွက်၊ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာလည်ပတ်နိုင်ခြင်းကိုလက်ဖြင့်ဖြစ်စေညွှန်ပြနိုင်သည်
ဝင်ရိုးတန်း MAWL အပြုသဘောဆောင်တဲ့ပြန်လုပ်နိုင်မှု စွမ်းအင် operating ပတ်ဝန်းကျင် ကိုယ်အလေးချိန် အရစ်ကျ အိုင်ပီအဆင့်
6 10KG ± 0.06mm 3KVA 0-45 ℃ 170KG မြေပြင် IP54 / IP65 (ခါး)
လုပ်ဆောင်ချက်အတိုင်းအတာ J1 J2 J3 J4 J5 J6
အများဆုံးအမြန်နှုန်း 180 ° / s 133 ° / s 140 ° / s 217 ° / s 172 ° / s 172 ° / s
Yunhua ကုမ္ပဏီသည်မတူညီသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူဖောက်သည်များကိုကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ အရေးပေါ် ဦး စားပေးမှုအရဖောက်သည်များသည်ရေကြောင်းနှင့်လေကြောင်းဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ YOO HEART ထုပ်ပိုးမှုများသည်ပင်လယ်နှင့်လေကြောင်းကုန်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် PL၊ မူရင်းလက်မှတ်၊ ငွေတောင်းခံလွှာနှင့်အခြားဖိုင်များကဲ့သို့သောဖိုင်များအားလုံးကိုပြင်ဆင်ပါမည်။ စက်ရုံတိုင်းကိုရက်ပေါင်း ၄၀ အတွင်းဖောက်သည်များထံမှသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းမရှိစေရန်စက်ရုပ်တိုင်းကိုသေချာစွာသယ်ဆောင်နိုင်သည့်အဓိကအလုပ်မှာလုပ်သားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
ဖောက်သည်တိုင်းသည် YOO HEART စက်ရုပ်ကိုသူတို့မ ၀ ယ်မီသိသင့်သည်။ ဖောက်သည်များအနေဖြင့် YOO HEART စက်ရုပ်တစ်လုံးရရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သူတို့၏အလုပ်သမားသည် Yunhua စက်ရုံတွင် ၃-၅ ရက်ကြာအခမဲ့သင်တန်းတက်ပါလိမ့်မည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ် WhatsApp အုပ်စုရှိလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ လျှပ်စစ်၊ ခဲယဉ်းထည်များ၊ ဆော့ဝဲလ်များအပြီးတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်တာဝန်ရှိသည်။ ပြproblemနာတစ်ခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားပါကကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာရှင်သည်ပြcustomerနာကိုဖြေရှင်းရန်ဖောက်သည်ကုမ္ပဏီသို့သွားလိမ့်မည်။ ။
ဖြေ။ ။ တရုတ်နိုင်ငံမှာပေါက်ကွဲမှုတိုက်ဖျက်ရေးစက်ရုပ်ကိုဘယ်တံဆိပ်တပ်လို့မှမရဘူး။ အကယ်၍ သင်သည်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်စက်ရုပ်ကိုပန်းချီဆွဲသည်ဆိုပါက static anti အဝတ်အစားများကိုဝတ်ဆင်သင့်ပြီးစက်ရုပ်သည်လမ်းကြောင်းနှင့် input သို့မဟုတ် output အချက်ပြများကိုပန်းချီစက်သို့သာရွေ့လျားနိုင်သည်။
Q-static အဝတ်အစားဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ မင်းထောက်ပံ့ပေးနိုင်မလား?
အေ static anti-stat အဝတ်အစားများသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုတားဆီးနိုင်သည်။ ပန်းချီဆွဲနေစဉ်မီးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောမီးပွားများကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။
A. များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါင်းစည်းသူက၎င်းစက်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူကိုလုပ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ငါတို့အတွက်ပန်းချီကားစက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောစက်ရုပ်ကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်။ သင်စက်ရုပ်ကိုသင်၏လမ်းကြောင်းပေါ်သို့သာရွှေ့ရန်လိုသည်။ ထုတ်ကုန်ဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ဆိုတာကိုအဖြေတစ်ခုပေးပါ။
Q5 ။ ပန်းချီဆွဲခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုဗီဒီယိုအနည်းငယ်ပြပေးလို့ရမလား။
A. သေချာတာပေါ့၊ ခင်ဗျားတို့ Youtube Channel ကိုသွားနိုင်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုတွေအများကြီးရှိတယ်
ရှေ့သို့ ပန်းချီစက်ရုပ် HY1050A-200
နောက်တစ်ခု: စက်ရုပ် HY1020A-200 ကိုတင်နှင့်ချချသည်
စက်ရုပ် HY-1010B-140 ကို တင်၍ ချပါ
စက်ရုပ် HY1020A-200 ကိုတင်နှင့်ချချသည်
palletizing စက်ရုပ် HY1010A-143
palletizing စက်ရုပ် HY1165A-290
စက်ရုပ် HY1003A-098 ပုံနှိပ်ခြင်း
အမှတ် ၈ Baijianshan လမ်း၊ Feicai ရုံး၊ Xuancheng မြို့ Anhui ပြည်နယ်